Somaliland: Wasiir hore oo Beeralay isu badalay, badalkii fadhi ku dirirka – Radio Daljir
Somaliland: Wasiir hore oo Beeralay isu badalay, badalkii fadhi ku dirirka
Janaayo 13, 2018 8:01 b 0
Wasiirkii hore ee ganacsiga Somaliland Cumar Shucayb Maxamed ayaa ku biiray beeralayda Somaliland, isagoona beer ka bilaabay deegaanka Sheelane oo 37km u jirta magaalada dekedda leh ee Berbera.
Cumar Shucayb ayaa sadex ka mid ah todobada maalmood ee isbuuca waqtigiisa geliya beeraha, waxaana uu sheegay dalka inuu qaniyahay islamar ahaantaana ay ka banaanyihiin fursado badan oo lagu noolaado.
Waxaa uu sheegay khudradda Tamaandhahda iyo basasha inuu beero, kuwaasi oo horay looga keeni jiray wadanka Itoobiya.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay dalka inuu ku haboonyahay in beeraha la maalgashto oo wax soo saar lala yimaado badalkii watqiga lagu lumin lahaa fadhi kudirirka iyo siyaasadda.
Madaxwaynayaasha iyo wasiirada xilalka ka qabta Soomaaliya ayaa intooda badan marka xilalka laga qaado ama mudadooda xil hayn ay dhamaato waxaa waqtigooda ay geliyaan dhaliisha dowladda, kala fogaynta umadda iyadoo qabylaad la dhexdhigayo iyo wax walba oo ay ku wiiqi karaan horumarka badalkii ay bulshada ay tusi lahaayeen dhabaha wanaagsan ee dowladnimada loo dhisi karo.
Madaxwaynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa oo sagootin loogu sameeyey Bosaso (dhegayso)
Kulan looga arrinsaday doorashooyinka dalka oo ka dhacay Caabudwaaq (dhegayso)